R/W Kheyre oo shaaca ka qaaday qalab ay u direen Somaliland iyo Puntland | Xaysimo
Home War R/W Kheyre oo shaaca ka qaaday qalab ay u direen Somaliland iyo...
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shaaca ka qaaday inay Somaliland iyo Puntland u direen xirmadii koowaad oo ah qalab looga hortagayo faafitaanka cudurka Coronavirus.
“Waxaan maanta u dirnay Somaliland iyo Puntland xirmadii koowaad ee qalabka ka hor-tagga Covid-19. Waxaa ku xigi doona Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle,” ayuu Kheyre ku yiri qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitter.
Kheyre ma bixin wax faah-faahin oo intaas dheer. Hase yeeshee ilo-wareedyo ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in agabkan uu yahay qeyb ka mid ah kaalmadii Soomaaliya kasoo gaartay Shiinaha